राम्रो बजार अनुसन्धानका लागि सर्वेक्षण प्रयोग गर्ने ays तरिकाहरू Martech Zone
सोमबार, फेब्रुअरी 13, 2012 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 हन्ना जॉनसन
संभावना छ कि यदि तपाईं पढ्दै हुनुहुन्छ Martech Zone, तपाईलाई पहिल्यै नै थाहा छ कि कुनै पनि ब्यापार रणनीतिमा बजार अनुसन्धानको सञ्चालन कति महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ मा SurveyMonkey, हामी विश्वास गर्दछौं कि निर्णय लिँदा राम्रोसँग सूचित हुनु नै तपाईंको व्यवसायका लागि गर्न सक्ने उत्तम कुरा हो (र तपाईंको व्यक्तिगत जीवन पनि!)।
अनलाइन सर्वेक्षणहरू मार्केट अनुसन्धान द्रुत, सजिलो र प्रभावी रूपमा लागत प्रदर्शन गर्न उत्तम तरिका हो। यहाँ ways तरीकाहरू छन् जुन तपाईलाई आज आफ्नो व्यवसाय रणनीतिमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ:
१. तपाईको बजार परिभाषित गर्नुहोस्
यथार्थ रूपमा बजार अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षले बजारलाई परिभाषित गरिरहेको छ। तपाईले आफ्नो उद्योग र उत्पादनलाई विज्ञानमा जान्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो तपाईंलाई अहिले सम्म पाउँदछ। के सेता, एक्लो पुरुषहरू उनीहरूको's० को उमेरमा तपाईंको शैम्पू खरीद गर्दैछन्, वा किशोर किशोरीहरू तपाईंको सबैभन्दा ठूला ग्राहकहरू हुन्? यस प्रश्नको जवाफले तपाईंको व्यापार रणनीतिमा गहिरो असर पार्नेछ, त्यसैले तपाईं पक्का हुनुहुन्छ कि तपाईं यसमा विश्वस्त हुनुहुन्छ।
एक साधारण डेमोग्राफिक्स सर्वेक्षण तपाइँको ग्राहकहरु, ग्राहकहरु, वा प्रशंसक आधार को लागी पठाउनुहोस्। एक विशेषज्ञ-निर्मित टेम्प्लेट प्रयोग गर्नुहोस्, वा आफ्नै सिर्जना गर्नुहोस्। उनीहरूको उमेर, लि gender्ग, जाति, शिक्षा स्तर, र चासोहरूको बारेमा सोध्नुहोस्। उनीहरूले कसरी तपाइँको उत्पादन वा सेवा प्रयोग गर्छन् सोध्नुहोस्, र तिनीहरूको प्रतिक्रियाको लागि सोध्नुहोस्। उनीहरू को हुन् र उनीहरूले कसरी तपाइँको उत्पादन प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने बारे जति धेरै तपाईंलाई थाहा छ, त्यत्ति नै राम्रोसँग तपाइँ तिनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र तिनीहरूलाई थप फिर्ता आउन जारी राख्नुहुनेछ।
२. संकल्पना परीक्षण
चलाउनुहोस् अवधारणा परीक्षण यो उत्पादन, ब्रान्ड, वा विचार गर्न उपभोक्ता प्रतिक्रिया मूल्यांकन गर्न को लागी यो बजार को पेश गर्नु भन्दा पहिले। यो तपाइँको उत्पादन को सुधार गर्न को लागी एक चाँडो र सजिलो तरीका प्रदान गर्दछ, सम्भावित समस्या वा त्रुटिहरु पहिचान, र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको छवि वा ब्रान्ड सही ढंगले लक्षित छ।
तपाइँको लोगो, ग्राफिक, वा विज्ञापन को लागी एक अनलाइन सर्वेक्षणमा तपाइँका विचारहरूको तस्वीर राख्नुहोस् र तपाइँको दर्शकलाई उनीहरूले मनपराउनेहरू छनौट गर्न लगाउनुहोस्। उनीहरूलाई के भयो भनेर सोध्नुहोस्, छविले उनीहरूलाई सोच्न र महसुस गर्न लगायो।
के हुन्छ यदि तपाईंलाई प्रतिक्रिया चाहिने कुरा छवि वा लोगो होइन, तर अवधारणा हो? तपाइँका उत्तरदाताहरू पढ्नको लागि एउटा संक्षिप्त सारांश लेख्नुहोस्। त्यसोभए उनीहरूले के याद गरे, तिनीहरूको प्रतिक्रिया के थियो, उनीहरूले कस्तो समस्याको आशा गर्न सक्थे भनेर सोध्नुहोस्। तपाईंको विचारमा विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न चुनौतिहरू र अवसरहरू देख्नेछन्, र तिनीहरूको प्रतिक्रिया अमूल्य हुनेछ जब तपाईं आफ्नो योजनाहरूलाई फाइन गर्नुहुन्छ।
थाहा छैन कसरी पुग्ने तपाइँको लक्षित दर्शकहरु? हामीसँग तपाईंसँग कुरा गर्न सक्ने एउटा ...
Ain. प्रतिक्रिया दिनुहोस्
एकचोटि तपाईंले आफ्नो बजार डेमोग्राफिक्स परिभाषित गर्नुभयो, तपाईंको विचारहरूको परीक्षण गर्नुभयो, र तपाईंको उत्पादन सिर्जना गर्नुभयो, त्यहाँ प्रक्रियामा अझै एक महत्त्वपूर्ण चरण छ। सोच्दै र विश्लेषण गर्दै प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं महान परिणामहरू जारी गर्न जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने। तपाईंले के राम्रो गर्नुभयो भनेर पत्ता लगाउनुहोस्, के समस्याहरू छन् मान्छेहरूसँग, र तिनीहरू के दिशा चाहन्छन् जुन तपाईं भविष्यमा लिनुहोस्।
तपाईंले सुझावहरू लिनु पर्दा सबै सुझावहरू लिनु पर्दैन। तर यसको लागि सोधेर र व्यक्तिले के भन्छ ध्यान दिएर, तपाईं भविष्यको रचनात्मक प्रयासहरूमा सफल हुन अझ राम्रो तयार हुनुहुनेछ। तपाइँका ग्राहकहरु तपाइँले सोध्नु को लागी सराहना गर्नेछ, र तिनीहरुले तपाईले अझ बढि बनाउनु भएको सुधारको कदर गर्नेछन्।
प्रभावकारी बजार अनुसन्धानमा संलग्न हुन तपाईलाई पैसा बनाउनु हुँदैन। तपाईंले बस इन्टरनेटमा तपाईंलाई उपलब्ध लागत प्रभावी उपकरणहरूको फाइदा लिन आवश्यक छ। मा SurveyMonkey हामी जहिले पनि हाम्रो टेक्नोलोजी सुधार गर्नका लागि काम गरिरहन्छौं जसले तपाईंलाई तपाईंको उत्तम, सूचित निर्णयहरू लिन मद्दत गर्दछ। तपाइँको लक्षित बजारमा पुग्न सर्वेक्षण पठाउँदै तपाइँ सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँका प्रयासहरू सकेसम्म प्रभावकारी छन्।
खुशी सर्वेक्षण सर्वेक्षण!
टैग: अवधारणा परीक्षणजनसांख्यिकीबजार अनुसन्धानअनलाइन सर्वेक्षणउत्पादन प्रतिक्रियाSurveyMonkeyबजार अनुसन्धानको लागि सर्वेक्षण
डेम: डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन भनेको के हो?
फेब्रुअरी १,, २०११ 13:१:2012 अपराह्न
हामी हाम्रो वार्षिक साना व्यवसाय सोशल मिडिया सर्वेक्षण चलाइरहेका छौं, पहिलो पटक सर्वेक्षणमेन्की प्रयोग गरेर। म निर्माण गर्न कत्ति सजिलो भएकोमा म वास्तवमै प्रभावित छु। तर के म साँच्चिकै मेरो प्रशंसक बनाएको छु बिभिन्न संकलकहरू हुन्। मलाई कुन प्लेटफर्महरू सबैभन्दा धेरै उत्तरदाताहरू ड्राईभ गर्दैछ भनि हेर्न सक्षम हुन मन पराउँदछ।
तपाईंलाई आफ्नो विचार साझा गर्न आमन्त्रित गर्न मनपराउँदछ। Tअब सर्वेक्षण लिनुहोस्।
फेब्रुअरी १,, २०११ 14:१:2012 अपराह्न
Loraine - म तपाईं संग "निर्माण गर्न सजिलो" टिप्पणी मा सहमत छु। जब हामी मेरो पहिलो स्टार्टअपको लागि आर एण्ड डी गर्दै थियौं, हामी सर्वेक्षणमान्कीमा लगभग सबै डाटा भेला गर्ने कुरामा निर्भर भयौं। मलाई लाग्छ कि यो उपकरण उद्यमीहरू र स्टार्टअपहरूको लागि आवश्यक हुनुपर्दछ!
फेब्रुअरी १,, २०११ 15:१:2012 अपराह्न
सर्वेक्षणहरू धेरै विशिष्ट सूचनाहरू जम्मा गर्ने ठूलो स्रोत रहन्छन्। सामाजिक मिडियाबाट ग्राहकको प्रतिक्रिया स gathering्कलन गर्ने प्रवृत्ति र यसले कसरी "पारम्परिक" वेब-सर्वेक्षण स्थानमा असर पार्दछ भन्ने बारे तपाइँका विचारहरू सुन्न ठूलो मानीएको छ। के हामी त्यस्तो स्थानमा जाँदैछौं जहाँ उनीहरू अब प्रासंगिक हुनेछैनन्?